လက်ရှိ Transformer၊ Transformer Amorphous Core၊ High-Frequency Transformer- Malio
PCB တပ်ဆင်ထားသော Current Transformer အမျိုးအစား
Casing အမျိုးအစား Current Transformer
Busbar Current Transformer ဖြင့်
Three phase Current transformer ၊
PCB တပ်ဆင်ထားသော EBW Shunt
ကြိုးဖြင့် EBW Shunt
Brass Terminal ဖြင့် EBW Shunt
Relay ၏ တည်ဆောက်ပုံ အစိတ်အပိုင်းများ
TN /HTN/STN/ FSTN LCD မျက်နှာပြင်
Fe-Based 1K107 Nanocsyrstalline ဖဲကြိုး
Fe-Based Amorphous C cores များ
Fe-Based Amorphous E cores များ
Fe-Based Amorphous Bars သည် cores များကိုပိတ်ဆို့သည်။
လက်ရှိ Transformer Core
Fe-Based Nanocrystalline ပါဝါထရန်စဖော်မာ Core
အသုံးများသော Mode Choke
Shanghai Malio စက်မှုလုပ်ငန်း Ltd. တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဗဟိုဌာနတွင် ရုံးချုပ်သည် မီတာတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် သံလိုက်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ငန်းများကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ယခုအခါ ၎င်းအား ဒီဇိုင်း၊ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော စက်မှုကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Malio သည် သင့်အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တိကျသောတူရိယာများ၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လေအား၊ နေစွမ်းအင်နှင့် EV စသည်တို့တွင် ကြီးမားသောပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ပါသည်။
တိကျသော AC/DC PCB တပ်ဆင်ထားသော အမျိုးအစား Current Transf...
Bushing Type AC/DC Current Transformer သည် smar...
Casing အမျိုးအစား Precision Current Transformer
DC immune သည် Busbar Type Current Transformer ဖြစ်သည်။
El အတွက် သုံးဆင့်ပေါင်းစပ်ထားသော လက်ရှိထရန်စဖော်မာ
PCB တပ်ဆင်ထားသော Encapsulated Electric Power Transfo...
တိုင်းတာခြင်းအတွက် စိတ်ကြိုက် LCD/LCM အပိုင်းပြကွက်
Cage Terminal Mechanical အစိတ်အပိုင်းများသည် Electrical D...
ကြေးတိုင်/လျှပ်စစ်အတွက် Screw Terminal...
လျှပ်စစ်မီတာ PCB တပ်ဆင်ထားသော EBW Manganese Cop...
လျှပ်စစ်မီတာ EBW Manganese Copper Shunt wi...
Smart Meter အတွက် 120A Magnetic Laching Relay
ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဓာတ်ပေါင်းဖို၏ သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများ/...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာတွင်တည်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင်ပြေသောပင်လယ်နှင့်လေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ပို့ဆောင်မှုထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားဈေးကွက်များကို ရေရှည်အာရုံစိုက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသပေါင်း 30 ကျော်တွင် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် သမားရိုးကျနှင့် စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
သမရိုးကျ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော လုံလောက်သော သိုလှောင်မှု ရှိပြီး စိတ်ကြိုက် ထုတ်ကုန်များကို ထိရောက်သော ထုတ်လုပ်မှု အစီအစဉ်များဖြင့် ဒီဇိုင်းဆွဲကာ ပေးပို့နိုင်သည် ။
လျှပ်စစ်မော်တာများအတွက် Overload Protection
အပူဓာတ်ပုံများသည် စက်မှုသုံးအဆင့်လျှပ်စစ်ဆားကစ်များတွင် ထင်ရှားသော အပူချိန်ကွာခြားချက်များကို ၎င်းတို့၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်သုံးဆင့်စလုံး၏ အပူပိုင်းခြားနားချက်များကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် နည်းပညာရှင်များသည် စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲလွဲချက်များကို လျင်မြန်စွာ တွေ့ရှိနိုင်သည်...
ဇွန်လ 01 ရက်၊ 2021 ခုနှစ်
Transformer ကို အဘယ်ကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သနည်း။
1. ရည်ရွယ်ချက်နှင့် transformer ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံများ a. ထရန်စဖော်မာ ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထရန်စဖော်မာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထရန်စဖော်မာ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပ အစိတ်အပိုင်းများကို ကောင်းမွန်သော အခြေအနေတွင် ထားရှိကာ "ရည်ရွယ်ချက်အတွက်" နှင့် လည်ပတ်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
လိပ်စာ- No.536၊ Laolu လမ်း၊ Laogang မြို့၊ Pudong New Area၊ Shanghai၊ China
ဖုန်း / WeChat / Whatsapp